Nodimandry i Dada Gaby Ny Voninavoko : lasa ilay «Rakipahalalan’ny hira sy dihy malagasy» | NewsMada
Nodimandry i Dada Gaby Ny Voninavoko : lasa ilay «Rakipahalalan’ny hira sy dihy malagasy»
Niezaka ny mpitsabo sy ny fianakaviana… Nodimandry teo amin’ny faha-83 taony Rakotomavo Gabriel na i Dada Gaby. Mpitarika ny tropy Ny Voninavoko kanefa koa mpikaroka, mpampianatra, mpihira ary mpamorona hira sy dihy malagasy izy.
« Amin’ny alahelo lehibe no ilazanay fianakaviana fa nodimandry, anio maraina tamin’ny 5 ora, i Dada ». Fanambarana nataon’i ChristianTsilavina, zanak’i Dada Gaby ary mpitarika ny Ny Voninavoko amin’izao fotoana, io. Lasa omaly tokoa ilay andrarezin’ny zavakanto malagasy, raha toa ka efa notsaboina nandritra ny andro maromaro, tetsy amin’ny efitrano famelomana aina etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha izy.
Nianjera indroa nisesy tao an-tranony izy, ny asabotsy 19 mey lasa teo, ka nitarika ny tsy fahasalamany ary nampidirana azy hopitaly izany. Tsy nahatsiaro tena nandritra ny andro maromaro kanefa efa nihatsara kely ny fahasalamany, nialoha izao nandehanan’i Dada Gaby izao.
Niainga tao amin’ny tropy Ravolana Fenomanana Rakotomavo Gabriel. Nanorina ny tropy Ny Voninavoko kosa izy, taorian’izay. Efa miditra amin’ny andian-taranaka fahafito amin’izao fotoana izao ny Ny Voninavoko. “Rakipahalalan’ny dihy sy ny mozika malagasy”, satria nitrandraka tany ifotony, ary niezaka nampianatra sy nanaparitaka izany i Dada Gaby. Hainy tsara ny nampita ny salegy, bahoejy, basesa, ôsika, sns, narahin’ny dihy nifanaraka tamin’izany.
Ireo tao anatin’ny tropiny aloha no nandray voalohany ny fampianaran’i Dada Gaby, teo amin’ny dihy sy mozika. Tsy vitsy koa anefa ireo mpanakanto nandray soa taminy, ary maro ireo mpikaroka mozika malagasy sy vahiny nitrandraka izay fahalalany izay.
Efa nitety firenen-dehibe maro tany ivelany i Dada Gaby. I Frantsa, i Soisa, i Allemagne, i Etazonia, sns, samy nitondray avo ny zavakanto malagasy avokoa. Nosaloran’ny Unesco ny anaram-boninahitra “Harena velona” mihitsy izy tamin’izany. Mpanakanto firifiry moa no tsy efa nindrana ny sanganasany raha tsy hilaza afa-tsy ry Rossy, Erick Manana, Kolibera, sns? Ary iza ny Malagasy tsy mbola naheno, na iray azy, amin’ireo hirany, toy ny “Tsiriry roa”, “Raozy mavokely”, “Lalatiana”, “Itondray tsikitsiky”, “Zanak’Iarivo”, “Mananjary”, “Zaza mitomany”, “Manja”, sns.
Miraradraraka ny fanomezam-boninahitra azy
“Mangidy ny vava, mangovitra ny tongotra, maina ny molotra ary fenon’ny alahelo ny fo raha nahita ny filazana fa maty i Dada Gaby. Hirakitra ho tantara tsy ho voakosika ny zava-bitany…” hoy Rajery.
“Nandritra ny 12 taona no niaina niaraka taminy, nanoro lalana nampianatra ary nampita traikefa maro amiko izy, nahalalako zavatra maro mikasika ny vakoka sy kolontsaina malagasy”, hoy kosa i Donné Randria Ernest.
“Isaorako ny nahary sy ny razana ny nahavitako ny adidy tamin’ny fahavelony, na amin’ny maha raiamandrenin’ny firenena na amin’ny maha ray mpiahy ny tenako azy amin’ny zavakanto. Anisan’ireo nampianatra ahy sy nahatonga ahy ho toy izao izy. Eo am-panomanana ny pao-tsatroka ho azy izahay sy ny mi’Ritsoka Production, saingy indrisy izy lasa izao”, hoy kosa i Rossy.
Ampahany ihany amin’ireo mpanakanto naneho ny fiaraha-miory sy nanome voninahitra an’i Dada Gaby ireo. Fantatra fa efa nisy ny hetsika nomanin’ireo mpanakanto malagasy sy mpikarakara hetsika any Frantsa, saika hatao ho fitadiavam-bola hanampiana ny fitsaboana azy. Nanambara izy ireo fa hatao ihany ny hetsika, anio, satria efa nankatoavin’ny fianakaviana izany ka hatao ho fara adidy amin’i Dada Gaby izay vola voaangona.
Andrasana kosa ny tohin’ny fandaharam-potoana amin’ny fanomezam-boninahitra farany an’i Dada Gaby. Maneho ny fiaraha-miory ho an’ny fianakaviana, ny tropy Ny Voninavoko ary ny fianakaviamben’ny zavakanto ny gazety Taratra.